Jesu Kristu—Mambo Mesiya Anounza Kururamisira kwaMwari | Swedera Pedyo0
1, 2. Ndepapi pakatsamwa Jesu, uye nei?
JESU akatsamwa zvinooneka—uye aiva nechikonzero chinonzwika. Pamwe ungazviona zvakaoma kumufungidzira akadaro, nokuti akanga ari munhu munyoro kwazvo. (Mateu 21:5) Akaramba achizvidzora zvakakwana, chokwadi, nokuti dzake dzakanga dziri hasha dzakarurama. * Asi chii chakanga chagumbura murume aida rugare uyu? Chiito chokusaruramisira kukuru.
2 Temberi yaiva muJerusarema yakanga ichikosha mumwoyo maJesu. Munyika yose, ndiyo bedzi yakanga iri nzvimbo tsvene yakanga yakatsaurirwa kunamatwa kwaBaba vake vokudenga. VaJudha vaibva kunyika dzakawanda vaifamba mufambo mukuru kuti vazonamatira ipapo. Kunyange Vemamwe Marudzi vaitya Mwari vaiuya, vachipinda muruvazhe rwetemberi rwavakanga vakachengeterwa kuti vashandise. Asi pakutanga muushumiri hwake, Jesu akapinda mutemberi akashamiswa nezvaakaona. Chokwadi, nzvimbo yacho yakanga yava kuita somusika pane kuva imba yokunamatira! Yakanga yakatsvikinyidzana vatengesi nevaichinja mari. Zvisinei, kusaruramisira kwakanga kuri papi? Kuvarume ava, temberi yaMwari yakanga ichingovawo zvayo nzvimbo yokubiridzira vanhu—kunyange kuvabira. Zvaidaro sei?—Johani 2:14.
3, 4. Kubiridzira kwei kwokukara kwaiitika paimba yaJehovha, uye chiitoi icho Jesu akaita kururamisa zvinhu?
3 Vatungamiriri vechitendero vakanga vaisa mutemo wokuti rudzi rumwe bedzi rwemari ndirwo rwaigona kushandiswa kuripira mutero wetemberi. Vaishanya vaifanira kuchinja mari yavo kuti vawane mari iyoyo. Naizvozvo vaichinja mari vacho vakaronga matafura avo mukati metemberi chaimo, vachibhadharisa pakuchinja kwoga kwoga kwaiitwa. Bhizimisi rokutengesa mhuka raibhadharawo zvikuru. Vaishanya vachida kuzopa zvibayiro vaigona kutenga chero kumutengesi upi aiva muguta, asi vakuru vakuru vepatemberi vaigona kuramba zvibayiro zvavo vachiti hazvina kukodzera. Zvisinei, zvibayiro zvaitengwa mutemberi imomo chaimo zvaitogamuchirwa chete. Sezvo vanhu vakanga vasisina mamwe maitiro, vatengesi vacho dzimwe nguva vaichaja mutengo wakakwiririsa. * Izvi zvaipfuura kungotengesa vachiita mari yakawanda. Kwakatoguma kwava kuba!
“Bvisai zvinhu izvi muno!”
4 Jesu aisagona kushivirira kusaruramisira kwakadaro. Iyi yakanga iri imba yaBaba vake pachake! Akagadzira tyava ndokutinha gurusvusvu remombe nemakwai kubva patemberi. Akabva afamba achienda kune vaichinja mari ndokupidigura matafura avo. Imbofungidzira mari yose iyoyo ichiti ngwenjere ngwenjere pauriri hwematombo anokosha! Akarayira zvakasimba varume vaitengesa njiva kuti: “Bvisai zvinhu izvi muno!” (Johani 2:15, 16) Zvinoratidza sokuti hapana akamboda kurwisana nomurume akashinga uyu.
“Mbudzi Kudya Mufenje Hufana Nyina”
5-7. (a) Upenyu hwaJesu asati ava munhu hwakaita kuti ave nepfungwa yakaita sei yeruramisiro, uye tingadzidzei pamuenzaniso wake? (b) Kristu akarwisa sei kusaruramisira kunobatanidza uchangamire hwaJehovha nezita?
5 Chokwadi, vatengesi vacho vakadzoka. Pashure peanenge makore matatu, Jesu akataura pamusoro pokusaruramisira kumwe chete ikoko, panguva ino achitora mashoko aJehovha pachake aishora avo vakaita imba Yake “bako remakororo.” (Mateu 21:13; Jeremia 7:11) Hungu, apo Jesu akaona kupambwa kwokukara kwaiitirwa vanhu uye kusvibiswa kwaiitwa temberi yaMwari, akanzwa semanzwiro akangoita Baba vake. Uye hazvishamisi! Kwemamiriyoni emakore asingaverengeki, Jesu akanga adzidziswa naBaba vake vokudenga. Somugumisiro, akazadzwa nepfungwa yaJehovha yeruramisiro. Akava muenzaniso mupenyu wechirevo chokuti, “Mbudzi kudya mufenje hufana nyina.” Naizvozvo kana tichida kuona mufananidzo wakajeka wezvakaita Jehovha paruramisiro, hapana zviri nani zvatingaita kunze kwokufungisisa muenzaniso waJesu Kristu.—Johani 14:9, 10.
6 Mwanakomana akaberekwa ari mumwe bedzi waJehovha akanga aripo apo Satani akati Jehovha Mwari murevi wenhema uye akaratidza kusava nechokwadi nokururama kwokutonga Kwake. Uku kwaiva kuchera kwakakura! Mwanakomana akanzwawo kudenha kwakazoitwa naSatani achiti hapana aizoshumira Jehovha asina udyire, nemhaka yorudo. Kupomera kwenhema uku chokwadi kwakarwadza mwoyo wakarurama woMwanakomana. Anofanira kuva akafara kwazvo kuziva kuti aizoita basa guru mukururamisa zvinhu! (2 VaKorinde 1:20) Izvozvo aizozviita sei?
7 Sezvatinodzidza muChitsauko 14, Jesu Kristu akapa mhinduro yokupedzisira, inogutsa kupomero yaSatani yokushora kuvimbika kwezvisikwa zvaJehovha. Jesu nokudaro akaisa hwaro hwokurevererwa kwokupedzisira kwouchangamire hwaJehovha nokutsveneswa kwezita Rake. Sezvo ari Mumiririri Mukuru waJehovha, Jesu achagadza ruramisiro yaMwari munyika yose. (Mabasa 5:31) Upenyu hwake pasi pano saizvozvowo hwairatidza ruramisiro yaMwari. Jehovha akati nezvake: “Ndichaisa mudzimu wangu paari, uye achaburitsa pachena kumarudzi kuti ruramisiro chii.” (Mateu 12:18) Jesu akazadzisa sei mashoko iwayo?
Jesu Anojekesa “Kuti Ruramisiro Chii”
8-10. (a) Tsika dzevatungamiriri vechitendero vechiJudha dzakasimudzira kuzvidzwa kwevakanga vasiri vaJudha uye vakadzi sei? (b) Mitemo yokutaurwa yakachinja sei Sabata raJehovha kuti rive mutoro unorema?
8 Jesu aida Mutemo waJehovha uye aiutevedzera muupenyu hwake. Asi vatungamiriri vechitendero vomuzuva rake vaimonyanisa nokushandisa Mutemo iwoyo zvisizvo. Jesu akati kwavari: ‘“Mune nhamo imi, vanyori nevaFarisi, vanyengeri! . . . Makarega nhau dzakakomba zvikuru dzoMutemo, dzinoti, kururamisira nengoni nokutendeka.” (Mateu 23:23) Hapana mubvunzo kuti vadzidzisi ivavo voMutemo waMwari vakanga vasiri kujekesa “kuti ruramisiro chii.” Asi, vakanga vari kudzikatidza ruramisiro yaMwari. Sei? Imbofunga nezvemienzaniso mishomanana.
9 Jehovha akarayira vanhu vake kuti vazviparadzanise nemarudzi echihedheni akanga akavapoteredza. (1 Madzimambo 11:1, 2) Zvisinei, vamwe vatungamiriri vechitendero vainyanyisa vakakurudzira vanhu kusema vose vakanga vasiri vaJudha. Mishnah yakatobatanidza mutemo uyu: “Mombe hadzingasiyiwi mumatanga evemamwe marudzi sezvo vachifungirwa kuti vanorara nemhuka.” Kufungira zvakaipa vose vakanga vasiri vaJudha zvakadaro kwakanga kusina ruramisiro uye kwaipesana kwazvo nepfungwa yoMutemo waMosesi. (Revhitiko 19:34) Mimwe mitemo yakaitwa nevanhu yaizvidza vakadzi. Mutemo waitaurwa waiti mudzimai aifanira kufamba shure kwete parutivi pomurume wake. Murume airayirwa kuti asataura nomukadzi pane vanhu, kunyange mudzimai wake chaiye. Sevaranda, vakadzi vakanga vasingabvumirwi kupa uchapupu mudare. Kwaitova nomunyengetero chaiwo waiitwa nevarume vachitenda Mwari kuti vakanga vasiri vakadzi.
10 Vatungamiriri vechitendero vakadzikatidza Mutemo waMwari nemitemo nemirayiro yakaitwa nevanhu. Somuenzaniso, mutemo weSabata waingorambidza basa nomusi weSabata, zvichitsaura zuva iroro nokuda kwokunamata, vozorodzwa nokunamata, uye kungozorora. Asi vaFarisi vakaita kuti mutemo iwoyo uve mutoro unorema. Vakazvigadza kuti vasarudze kuti “basa” rairevei. Vakatumidza zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana 39 kuti ibasa, zvakadai sokukohwa kana kuti kuvhima. Mapoka aya akaparira kuti pave nemibvunzo isingaperi. Kudai munhu aiuraya inda nomusi weSabata kwaiva kuvhima here? Kudai aipurura hura yezviyo zvinozadza ruoko kuti adye achifamba hake, kwaiva kukohwa here? Kudai aizoporesa mumwe munhu airwara, kwaiva kushanda here? Mibvunzo iyoyo yakabatwa nemitemo isingachinji inodonongodza zvose.
11, 12. Jesu akaratidza sei kupesana kwake netsika dzisiri dzeMagwaro dzevaFarisi?
11 Mumamiriro ezvinhu akadaro Jesu aizobatsira sei vanhu kunzwisisa chinonzi ruramisiro? Mudzidziso dzake uye mararamiro aaiita, akamira noushingi achirwisana nevatungamiriri vechitendero ivavo. Imbotanga wafunga dzimwe dzedzidziso dzake. Akashora zvakananga mitemo yavo isingaperi yavakazviitira, achiti: “Imi munoshayisa simba shoko raMwari netsika yenyu yamakagamuchidzana.”—Mako 7:13.
12 Jesu akadzidzisa zvine simba kuti vaFarisi vakanga vasina kururama pamusoro pomutemo weSabata—kuti, chaizvoizvo, vakanga vatadza kunzwisisa chinangwa chaicho chomutemo iwoyo. Mesiya, akatsanangura kudaro, ndiye “Ishe wesabata” uye naizvozvo ane kodzero yokurapa vanhu nomusi weSabata. (Mateu 12:8) Kusimbisa pfungwa yacho, akaita zvishamiso zvokurapa pachena nomusi weSabata. (Ruka 6:7-10) Kurapa kwakadaro kwakanga kuri kungofanoratidza kurapa kwaachaita munyika yose muMakore Ane Chiuru Okutonga kwake. Mireniyamu iyoyo ndiyo ichava Sabata rokupedzisira, apo vanhu vose vakatendeka vachazorora pakupedzisira pamazana emakore okutambura nokuremerwa nechivi norufu.
13. Mutemo upi wakavapo somugumisiro woushumiri hwaKristu hwepasi pano, uye wakanga wakasiyana sei nowakautangira?
13 Jesu akajekesawo kuti ruramisiro chii pakuti mutemo mutsva, “mutemo waKristu,” wakavapo pashure pokunge apedza ushumiri hwake hwepasi pano. (VaGaratiya 6:2) Kusiyana nowakautangira, Mutemo waMosesi, mutemo mutsva uyu wainyanya kubva kwete pandandanda yemirayiro yakanyorwa, asi panheyo. Zvisinei, waibatanidza mimwe mirayiro yakananga. Mumwe waiyoyi Jesu akaudana kuti “murayiro mutsva.” Jesu akadzidzisa vateveri vake vose kuti vadanane sokuvada kwaakanga aita. (Johani 13:34, 35) Hungu, rudo rwokuzvipira rwaifanira kuva chiratidzo chavose vanorarama maererano no“mutemo waKristu.”
Muenzaniso Mupenyu Weruramisiro
14, 15. Jesu akaratidza sei kuti aiziva paigumira simba rake, uye nei izvi zvichikurudzira?
14 Jesu haana kungodzidzisa nezvorudo. Akararama mukuwirirana no“mutemo waKristu.” Wakanga uri mukati moupenyu hwake. Imbofunga nezvenzira nhatu umo muenzaniso waJesu wakajekesa chiri ruramisiro.
15 Kutanga, Jesu haana kuita kusaruramisira kupi nokupi. Zvimwe wakaona kuti kusaruramisira kuzhinji kunoitika apo vanhu vasina kukwana vanozvikudza vachipfuura panogumira simba ravo. Jesu haana kudaro. Pane imwe nhambo, mumwe murume akaenda kuna Jesu akati: “Mudzidzisi, udzai, mukoma wangu kuti agovane neni nhaka.” Jesu akapindura kuti chii? “Iwe munhu, ndiani akandigadza kuti ndive mutongi kana mugovanisi pakati penyu imi vanhu?” (Ruka 12:13, 14) Izvozvo hazvishamisi here? Uchenjeri hwaJesu, unyanzvi hwake hwokuyera zvinhu, uye kunyange ukuru hwechiremera chake chaakapiwa naMwari zvaipfuura zvevanhu vose pasi pano; asi akaramba kuzvibatanidza munhau iyi, sezvo akanga asina kupiwa chiremera chacho chokuita kudaro. Jesu akangogara achiziva paanofanira kugumira nenzira iyi, kunyange mukati memamireniyamu aaivapo asati auya somunhu. (Judha 9) Zvinoreva zvakawanda pamusoro paJesu kuti anovimba naJehovha nokuzvininipisa kuti asarudze zvakarurama.
16, 17. (a) Jesu akaratidza sei ruramisiro mukuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaMwari? (b) Jesu akaratidza sei kuti pfungwa yake yeruramisiro yaiva nengoni mukati?
16 Chechipiri, Jesu akaratidza ruramisiro munzira yaakaparidza nayo mashoko akanaka oUmambo hwaMwari. Akaratidza kusasarura. Asi, akaedza kusvika kuvanhu vemarudzi ose, vangava varombo kana vapfumi. Kupesana neizvi, vaFarisi vaidzinga varombo, vanhuwo zvavo neshoko rokuzvidza rokuti ʽam-ha·ʼaʹrets, kana kuti “vanhu vepasi.” Jesu akaruramisa kusaruramisira ikoko noushingi. Paakadzidzisa vanhu mashoko akanaka—kana kuti, pamusoro pazvo, paakadya nevanhu, akavapa zvokudya, akavarapa, kana kuti kunyange kuvamutsa—akatsigira ruramisiro yaMwari uyo anoda kusvika “vanhu vose.” *—1 Timoti 2:4.
17 Chechitatu, pfungwa yaJesu yeruramisiro yakanga ine ngoni huru. Akatamburira kubatsira vatadzi. (Mateu 9:11-13) Aikurumidza kubatsira vanhu vakanga vasina simba rokuzvidzivirira. Somuenzaniso, Jesu haana kubatana nevatungamiriri vechitendero mukutsigira kusavimba vanhu vose veMamwe Marudzi. Nengoni akabatsira nokudzidzisa vamwe vavo, kunyange zvazvo akanga akanyanya kunanga vanhu vechiJudha. Akabvuma kuitira mukuru weuto weRoma chishamiso chokurapa, achiti: “Handina kuwana munhu ane kutenda kukuru kwakadai muna Israeri.”—Mateu 8:5-13.
18, 19. (a) Jesu akatsigira kuremekedzwa kwevakadzi munzira dzipi? (b) Muenzaniso waJesu unotibatsira sei kuona kubatana kwakaita ushingi neruramisiro?
18 Saizvozvowo, Jesu haana kutsigira maonero aiva akakurumbira pamusoro pevakadzi. Pane kudaro, noushingi akaita zvakanga zvakarurama. Vakadzi veSamariya vaionekwa sevasina kuchena seveMamwe Marudzi. Asi, Jesu haana kuzeza kuparidzira mukadzi weSamariya patsime reSikari. Chaizvo, kwaiva kumukadzi uyu uko Jesu akatanga kuzvizivisa zvakajeka saMesiya akapikirwa. (Johani 4:6, 25, 26) VaFarisi vaiti vakadzi havafaniri kudzidziswa Mutemo waMwari, asi Jesu akapedza nguva yakawanda nesimba achidzidzisa vakadzi. (Ruka 10:38-42) Uye nepo tsika dzaiti vakadzi vaisagona kuvimbwa navo kuti vape uchapupu hungavimbwa nahwo, Jesu akaremekedza vakadzi vanoverengeka nokuva neropafadzo yokutanga kumuona pashure pokumutswa kwake. Akatovaudza kuti vaende kunotaurira vadzidzi vake vechirume pamusoro pechiitiko chinokosha kupfuura zvose ichi!—Mateu 28:1-10.
19 Hungu, Jesu akajekesera marudzi chinonzi ruramisiro. Muzviitiko zvizhinji, akaita kudaro nokuisa upenyu hwake mungozi zvikuru. Muenzaniso waJesu unotibatsira kuona kuti kutsigira ruramisiro yechokwadi kunoda ushingi. Nenzira yakakodzera, akanzi “Shumba yokudzinza raJudha.” (Zvakazarurwa 5:5) Yeuka kuti shumba chiratidzo cheruramisiro youshingi. Zvisinei, munguva pfupi iri kutevera, Jesu achaita kuti pave neruramisiro yakatokura. Mupfungwa yakazara, achaita kuti pave no“kururama panyika.”—Isaya 42:4.
Mambo Mesiya ‘Anogadza Kururama Panyika’
20, 21. Munguva yedu, Mambo Mesiya akasimudzira sei ruramisiro pasi pose nomuungano yechiKristu?
20 Kubva paakava Mambo Mesiya muna 1914, Jesu akasimudzira ruramisiro panyika. Akadaro sei? Akatsigira kuzadzika kwouprofita hwake huri pana Mateu 24:14. Vateveri vaJesu vari pasi pano vakadzidzisa vanhu venyika dzose chokwadi pamusoro poUmambo hwaJehovha. Kufanana naJesu, vari kuparidza nenzira yokusasarura uye ine ruramisiro, vachivavarira kupa munhu wose—mukuru kana muduku, mupfumi kana murombo, murume kana mukadzi—mukana wokusvika pakuziva Jehovha, Mwari weruramisiro.
21 Jesu ari kusimudzirawo ruramisiro muungano yechiKristu, iyo ari Musoro wayo. Sezvakaprofitwa, anogovera “zvipo zviri varume,” vakuru vechiKristu vakatendeka vanotungamirira muungano. (VaEfeso 4:8-12) Mukufudza boka raMwari rinokosha, varume vakadaro vanotevedzera muenzaniso waJesu Kristu mukusimudzira ruramisiro. Vanogara vachiyeuka kuti Jesu anoda kuti makwai ake abatwe neruramisiro—pasinei nenzvimbo, mukurumbira, kana kuti mamiriro avo oupfumi.
22. Jehovha anonzwa sei pamusoro pokusaruramisira kwakatekeshera kwenyika yanhasi, uye akagadza Mwanakomana wake kuti aitei nezvazvo?
22 Zvisinei, munguva yemberi iri pedyo, Jesu achagadza ruramisiro munyika nenzira isati yamboitwa. Kusaruramisira kwakatekeshera munyika ino ine uori. Mwana oga oga anofa nokuziya nenzara anourayiswa nokusaruramisira kusingagoni kupembedzwa, kunyanya patinofunga nezvemari nenguva zvinopedzerwa mukugadzira zvombo zvehondo nokugutsa zvishuvo zvoudyire zvevanotsvaka mafaro. Mamiriyoni enzufu dzaisafanira kuitika gore negore inzira imwe pakati pemarudzi mazhinji okusaruramisira, zvose zvinomutsa hasha dzaJehovha dzakarurama. Akagadza Mwanakomana wake kuti arwe hondo yakarurama nenyika ino yose yakaipa kuti agumise kusaruramisira kwose zvachose.—Zvakazarurwa 16:14, 16; 19:11-15.
23. Pashure peAmagedhoni, Kristu achasimudzira ruramisiro nokusingaperi sei?
23 Zvisinei, ruramisiro yaJehovha haingodi kungoparadzwa kwevakaipa chete. Akagadzawo Mwanakomana wake kuti atonge so“Muchinda Worugare.” Pashure pehondo yeAmagedhoni, kutonga kwaJesu kuchagadza rugare pasi pose, uye achatonga “nokururamisira.” (Isaya 9:6, 7) Ipapo Jesu achafara kubvisa kusaruramisira kwose kwakaparira nhamo nokutambura kwakawanda kudaro munyika. Nokusingaperi kwose, achasimudzira ruramisiro yakakwana yaJehovha nokutendeka. Saka zvinokosha kuti titsvake kutevedzera ruramisiro yaJehovha zvino. Regai tione kuti izvozvo tingazviita sei.
^ ndima 1 Mukuratidza hasha dzakarurama, Jesu akanga akaita saJehovha, uyo “uzere nehasha” kuuipi hwose. (Nahumi 1:2) Somuenzaniso, pashure pokunge Jehovha ataurira vanhu vake vakanga vatsauka kuti vakanga vaita imba yake “bako remakororo,” akati: “Kutsamwa kwangu nehasha dzangu zvichadururirwa panzvimbo ino.”—Jeremia 7:11, 20.
^ ndima 3 Maererano neMishnah, kunyunyuta kwakazomuka pashure pemakore pamusoro pomutengo wepamusoro wenjiva dzaitengeswa patemberi. Mutengo wacho wakaderedzwa nokukurumidza nezvikamu 99 kubva muzana! Ndiani ainyanya kuita mari nokutengesa kwaibhadhara uku? Vamwe vanyori venhau dzakaitika vanoti misika yepatemberi yakanga iri yeimba yoMupristi Mukuru Ananiyasi, ichigovera upfumi huzhinji hwemhuri iyoyo youpristi.—Johani 18:13.
^ ndima 16 VaFarisi vaiti vanhu vakaderera, vakanga vasinganyatsozivi Mutemo, vakanga “vakatukwa.” (Johani 7:49) Vakati munhu haafaniri kudzidzisa vanhu vakadaro kana kuti kutengeserana navo kana kudya navo kana kunyengetera navo. Kana munhu aizobvumira mwanasikana wake kuroorwa nomumwe wavo zvaizova zvakaipa kupfuura kumurega achidyiwa nezvikara. Vaiona sokuti hakuna tariro yorumuko nokuda kwevakaderera vakadaro.
Pisarema 45:1-7 Nei tingavimba kuti Mambo Mesiya achasimudzira ruramisiro yakakwana?
Mateu 12:19-21 Maererano nouprofita, Mesiya aizobata sei vakaderera?
Mateu 18:21-35 Jesu akadzidzisa sei kuti ruramisiro yechokwadi ine ngoni?
Mako 5:25-34 Jesu akaratidza sei kuti ruramisiro yaMwari inorangarira mamiriro ezvinhu omunhu?
Tingabatsirwa sei nekutonga kweUmambo? Ona kuti Mambo Mesiya anochenesa, anodzidzisa uye kuti anoronga sei vanhu vake.